Okuhehayo - lokhu ... Incazelo, izinhlobo futhi ukuphoqwa
Ukuphoqelela - uhlobo ukwehla, futhi lapho umuntu akafuni ukwenza izinto ezithile. Izinyathelo ezinjalo, okuyinto siphoqa abantu ukuba zikhathi okungafunwa noma ngisho engamukeleki kubo kungaba kokubili uhlamvu okubi futhi, ngakolunye uhlangothi, esisemthethweni, ukuthi kusemthethweni. Konke kuzoncika ubunjalo kanye nohlobo yokuphoqelela abantu esenzweni esithile.
Okuhehayo - lesi senzo sokuphoqelela umuntu ufuna ukwenza lokho okuyomzuzisa engathandeki ngaye. Lo mqondo ungaba kokubili omuhle futhi incazelo ongathandeki, futhi kuvamile. Ukuphoqa bakwazi ukuba cishe ubugebengu, kodwa futhi angase abe nature kwezomthetho, ukuthi kusemthethweni ngokuphelele futhi asetshenziswa kabanzi.
Into ebaluleke kakhulu iyona khona kwezimiso voluntariness, noma kunalokho, itlhogeko. Umuntu ubani ukusebenzisa izilinganiso sibhekwe, kufanele angathandi ukwenza noma yisiphi isenzo futhi nezinguquko ezithile. Uma ngokuzithandela uyavuma-ke, akusho wayencisha ngokwakho ngenkathi hhayi nokukhawulela, kubhekwe ukuphoqwa ukuziphatha okunjalo ngeke.
Ukuze lolu hlobo Isenzo kuyavumelana ngokuphelele nemvelo yawo, kumele babe izimo ezintathu. Eyokuqala wabo - khona ecaleni sibhekwe. Isidingo sokuthi kube umuntu noma mhlawumbe abantu abambalwa, abayoba afeze esemqoka kakhulu. Ngokwesibonelo, uma lokhu umkhawulo nenqubo, kungaba enkantolo noma komthetho izikhulu.
Isimo sesibili kuyoba khona ukuphoqwa into. Ngenxa yalokhu abantu ababeke nakho ngokwayo izinyathelo ezithile sibhekwe. Kubalulekile ukuthi izenzo asebenza kubo, kufanele esasenqatshelwe, futhi ukuthathelwa umshuwalense ngokumelene kungenzeka wabo akufanele kube. Nokho, isimo Taboo hhayi ngaso sonke isikhathi senze njengoba izinyathelo zombuso ukuphoqwa isicelo, it ovunyelwe ngumthetho.
Ekugcineni, isimo yesithathu - khona noma yisiphi isenzo ophoqelelwe. Lokho, ohlangothini sibhekwe baphoqeleka ukuba benze izenzo ezithile, jeza phi Umkhawulo noma nokuswela, nasekusweleni futhi lezi kuzobhekwana nabo nokuqinisa isenzo.
Amafomu yokuphoqelela abantu esenzweni esithile
division Jikelele imihlola ezifana kokucindezelwa kusho incazelo izinhlobo ezimbili eziyinhloko: ngokwengqondo nangokomzimba. Izinto eziyinhloko ezikhathazayo kuqala imiphumela yokuziphatha, nemiphumela nesimo sakhe sengqondo. Kujwayele kuzibonakalisa ngesimo izinsongo, avame eyenziwa ingcindezi ngesithembiso ngobudlova.
Uhlobo lwesibili siqondiswe ukuphoqwa ngokomzimba. Ubuhlungu, ukulimala kwezinsini, ukungakwazi - yimuphi umthelela indoda, isidumbu sakhe. Yiqiniso, lezi zinhlobo jikelele kakhulu, bekhuluma division of ukuphoqelelwa sisonke, kodwa futhi bavame ihlaba umkhosi ifomu efanayo isimo noma zomthetho futhi kuphambuka ngokuphelele kusukela nekucondza ngalokufanako lokhu mkhuba futhi kubhekwa zomthetho.
Komthetho iyincenye lebalulekile nobulelesi inqubo uhlelo. Ngaphezu kwalokho, kuyinto owande kakhulu kokugcinwa ngokuvamile, njengoba kusemthethweni hhayi kungavunyelwe, ngaphezu kwalokho, it is a indlela evamile ekunqandeni ubulelesi. kokucindezelwa State Ubuye zokungcebeleka zayo, okuyinto kunqunywa umkhakha we wesenzo.
Indlela esetshenziswa kakhulu uhlobo ukuphoqwa lomthetho isigebengu. Ngemva ukuthunjwa isephulamthetho kubaluleke kakhulu ukuvimbela ukuziphatha omubi ingxenye yakhe. Ilungelo yokuphoqelela abantu esenzweni esithile kuleli cala, kukhona iziphathimandla komthetho noma inkantolo, kuye ngohlobo wezinyathelo isicelo.
Ngaphezu kwalokho esigebengwini, sikude njengenhlangano zokuphatha, kwesokudla civil kanye ukuphoqwa kwezigwegwe. Ukuphoqa yaziwa ukunqabela ukwenza lutho, ngakho ngamunye lezi izimboni kudinga umuntu wenze icala okungukuthi bahluke kusukela ubugebengu nezenzo zakho ezithile isinxephezelo nemiphumela engemihle.
Ngokwenqubo sibhekwe izinyathelo
Enforcement isenzo - lena izinyathelo ezisebenza nabalingisi efanele, okungukuthi amaphoyisa aqapha. Yonke imibuzo mayelana nemibandela ukuqaliswa yabo, izindlela kanye migomo ilungiswe Criminal Procedure Code, okuyinto iyaqinisa zonke amaphuzu adingekayo ukusiza ukuvimbela ubugebengu.
izinyathelo sibhekwe zihlukaniswe amaqembu amabili, labo ukuze kuvinjelwe izenzo ezingafanele kuyi-ingxenye umuntu esolwa ubugebengu kanye nalabo loniketa zomthetho enqubeni lobugebengu, okuyilona elisebenzayo futhi ebaluleke ngokulinganayo. Nokho, ukunakekelwa okukhethekile kufanele inikwe iqembu lokuqala izinyathelo sibhekwe.
isilinganiso izifo. avelelwe
Ukuvalela - isilinganiso sibhekwe, okubhekisele izidumbu yophenyo. Ngokuvamile lokhu kwenzeka ukuze ugcine umuntu esolwa ubugebengu. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuba agqunywe isakhamuzi kuphela isikhathi esithile, okungukuthi, amahora amane nesishiyagalombili, esidinga ukuba isinqumo ngokushesha bezimiso zawo.
Kwakungemva nokuvalelwa omunye izinyathelo yokucindezeleka ingakhethwa Yiqiniso, uma kunesidingo. Lezi zihlanganisa: isiqinisekiso siqu; isiqeshana esiphakathi kokulalelwayo; isibambiso; ukubopha kulokhu ikhaya; Ifanele umuntu ngaphansi iminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala, kanye abagcina induna iyunithi empi; yeziboshwa.
Ngayinye yalezi zinyathelo sisetshenziswa kuphela ngesisekelo ngesinqumo lo mseshi, futhi kwezinye izimo, ezifana isibonelo ibheyili noma ukuvalelwa ejele ngesisekelo isinqumo senkantolo. Kulokhu, njalo acabangele imibandela kanye yikuphi ukwephula isici zenqubo ye esibuzwayo ukukhishwa semthethweni we isinqumo esenziwe futhi ngokufanele ukuyeka ukuvimbela ikhomishana ubugebengu esikhathini esizayo.
Meaning of impoqo, njengoba isilinganiso zokulungisa
Ukuphoqelela - ngaso sonke isikhathi kuyingxenye ebalulekile yenqubo lobugebengu, esiza ukuvimbela ikhomishana ubugebengu esikhathini esizayo futhi ukuyeka ukuziphatha omubi ingxenye abasolwa. Ngokungafani ukuphoqwa iyonke, it is hhayi kunqatshelwe ngokomthetho futhi kusekelwa Umlayo kubaluleke kakhulu kanye nomthelela emphakathini.
Yiqiniso, ukuphoqelelwa ngawodwana, njengoba into ingcindezi emzimbeni nasengqondweni emhlabeni umuntu, into ezimbi. Yingakho umthetho ichaza ngokusobala imingcele isicelo wezinyathelo ezahlukene nokuvimbela ubugebengu, ubeka izenzo zomthetho uzimele futhi elungisa izimiso ezilawula ukubaluleka besithunzi sobuntu nodumo.
Ikhodi-Criminal Procedure: isinqumo - kungcono ...
Amacala ayebekwe umuntu
Art. 6 Ikhodi Criminal Procedure: ukuqashwa kukaNksz zobulelesi
Umthetho inqubo lobugebengu
Article 110 we Criminal Code: bugebengu, isijeziso, uhlobo indlela lativa ngayo, wokuqulwa kwamacala ezinkantolo, ehlaziya Article 110 we Criminal Code
Ukugunda izinwele Modern Julia men'shovoy
Vyacheslav Klimov. Indaba emangalisayo mayelana nokulondolozwa kwentsha
Twine ukuze kusetshenziswe: imisipha Mash
Ummeli Zorkin Valeriy Dmitrievich: Biography, imiklomelo kanye nomndeni
Ngingakujabulela yini Geksoral ngesikhathi sokukhulelwa
Inkungu Lights: Izici and Izinzuzo
Indlela yokwenza inhlama ibe pasties ku lamanzi esiphethu?
Smile: ukuthi kuyini, okushiwo lucebe ye izwi